rita makarau Archives - Zimbabwe Online News
Home » Posts tagged "rita makarau"
ZEC chairperson Rita Makarau says she is waiting for Zanu PF to submit a name of the person to fill the late Kumbirai Kangai’s senatorial seat.
The post We’re waiting for Zanu PF to forward Gono’s name: Zec appeared first on The Zimbabwe Independent.
THE Zimbabwe Electoral Commission (Zec) has clarified that counting of votes will be done at polling stations while announcing of ward, constituency and provincial results for proportional representation will be […]
The post Counting to be done at polling stations — Zec appeared first on The Zimbabwe Independent.
July 29, 2013 Web Desk National, News No Comment
Makarau assures ‘aliens’ on registration
ZIMBABWE Electoral Commission (Zec) chairperson Justice Rita Makarau has assured “aliens” they would not be turned away at registration centres/
The post Makarau assures ‘aliens’ on registration appeared first on The Zimbabwe Independent.
Makarau speaks out
Zimbabwe Electoral Commiss-ion (Zec) chairperson Justice Rita Makarau (RM) has chall-enged critics who have accused Zec of being run by state security operatives and incompetent officials to prove it. Makarau [...]The post Makarau speaks out appeared f...